पछाडि मोटो पर्स राख्नेहरु होसियार ! जाला मेरुदण्ड !! बच्ने उपाय यस्ता छन् | Rajmarga
पछाडि मोटो पर्स राख्नेहरु होसियार ! जाला मेरुदण्ड !! बच्ने उपाय यस्ता छन्
बिहानै नुहाएर तयार भयो, कपाल मिलायो, घडी लगायो, मोबाइल चेक ग-यो र काँङ्गियो–पर्स राखेर कार्यालय वा पसल जानका लागि तयार । संसारभरका अधिकांश पुरुषको बिहानी यसरी नै गुज्रने गर्दछ ।
मोबाइलका अलावा यी सबैमा एउटा अर्को कुरा पनि हुन्छ, जुन भलियो भने दिनभर ठुलै काम अधुरो रहेजस्तो लाग्दछ, त्यो हो पर्स ।
यो पर्समा पैसा, तस्वीर, क्रेडिट–डेबिट कार्ड, ड्राइभिङ परिचयपत्र र अन्य अत्यावश्यक पहिचानपत्रहरु राखिएको हुन्छ । स्पष्ट छ, यति धेरै कुरा एउटै ठाउँमा राख्दा पर्सको जिम्मामा धेरै जिम्मेवारी पनि हुन्छ ।
मोटो पर्सबाट हानी हुन्छ ?
यही कारणबाट पर्स निकै मोटो पनि हुन्छ । र, यो पर्स कहाँ राखिन्छ ? अधिकांश पुरक्षले पाइन्टको पछिल्लो खल्तीमा राख्ने गर्दछन् ।
र, यही बानी खतरनाक बन्न सक्दछ । यदि तपाई केही समयका लागि पर्स पछाडीको खल्तीमा राख्नु हुन्छ भने यसबाट कुनै खास समस्या हुँदैन ।
तर, यदि त्यो दिनभर वा फेरी घन्टौ तपाईको पछाडिको गोजीमा आरामसँग बस्छ भने त्यो तपाईका लागि सोचनीय विषय हुन सक्दछ।
सामाजिक सञ्जालमा केही मानिस कुरा गरिरहेका छन् कि पछाडिको गोजीमा मोटो पर्स राख्दा मेरुदण्डको हड्डी टेढो हुन्छ । के यो सत्य हो ? र, सबैतिर त्यसै पनि यो बानी देखिन्छ कि पर्स जति बढी मोटो हुनेछ, रवाफ त्यति नै बढ्नेछ ।
कहाँ हुन सक्दछ पीडा ?
मेन्सहेल्थमा एउटा रिपोर्ट छापिएको थियो, जसमा युनिभर्सिटी अफ वाटरलुका प्रोफेसर अफ स्पाइनल बायोमेकानिक्स स्टुअर्ट मैकगिले बताएका छन् कि यो पर्स केही समयका लागि राख्नका लागि हुन्छ ।, तर यदि तपाई कार्ड, बिल र सिक्कासहितको राखेर घण्टौ बस्नु हुन्छ भने यसबाट तपाईको हिपको ज्वाइन्ट र कम्मरको तल्लो हिस्सामा दुखाई सुरु हुनेछ।
यो समस्या सुरु हुन्छ सियाटिक नर्भका साथ, जुन ठिक हिपको ज्वाइन्टको पछाडि हुने गर्दछ । मोटो पर्स राखेका कारणबाट यही तन्त्रिका बटुए र हिपको बिचमा दबिन्छ र समस्या खडा हुन सक्दछ।
यो गम्भीर विषय यसकारण हो, किनभने पीडा भलै हिपबाट सुरु हुन्छ तर यो खुट्टाको तल्लो भागसम्म पनि जान सक्दछ। डा. मैकगिलले ढाडको पीडा अध्ययन गर्नका लागि एउटा प्रयोग गरे, जसमा एउटा हिपको मुनि सानो आकारको वालेट राखे ।
नितम्बमा के हसर होला ?
पछिल्लो गोजी मोटो पर्स राखेका कारणबाट पेल्भिस (नितम्ब) पनि एकातिर झुकिरहन्छ, जसका कारणबाट मेरुदण्डको हड्डीमा थप बढी दबाव पर्दछ ।सिधा बस्नुको साटो कम्मरको तल्लो हिस्सामा इन्द्रधनुषजस्तो आकार बन्दछ ।
र, पर्स जति मोटो हुनेछ, शरीर त्यति नै एकातिर झुक्नेछ र त्यति नै बढी पीडा हुनेछ । तर समस्या यो छ कि मोटो पर्स अगाडीको गोजीमा राख्न पनि मुश्किल छ, किनभने यसो गर्दा अगाडिको भागमा पीडा हुन सक्दछ।
केही चिकित्सकहरुका अनुसार मात्र मोटो पर्स राख्दा मेरुदण्डको हड्डी वा स्पाइनमा टोढोपन आउनेछ, यो भलै सत्य नहोस् तर यदि स्पाइनमा पहिलादेखि नै कुनै समस्या छ भने त यो निकै ठुलो समस्या सिर्जना गर्ने खालको पक्कै हुनेछ ।
दिल्लीको प्राइमस अस्पतालमा हड्डी विशेषज्ञ डाक्टर कौशलकान्त मिश्राले के पछिल्लो गोजीमा पर्स राख्दा समस्या आउछ भन्ने प्रश्नको उत्तर यसरी दिए–आदर्श स्थितिमा कुनै समस्या हुनु हुँदैन । यदि स्पाइन सामान्य छ तब कुनै समस्या हुने छैन ।
लामो समय खतरनाक
तर यो मामिलामा मेरुदण्डको हड्डी सामान्य हुनु आवश्यक छ।
के त्यो हो भने पछाडिको गोजीमा मोटो पर्स राख्दा कुनै समस्या हुँदैन भनेर मान्न सकिन्छ? उनले भने–यसो पनि होइन । यदि तपाई केही समयका लागि यसो गर्नु हुन्छ भने केही छैन । तर, यदि तपाई घण्टौ यसो गर्नु हुन्छ भने तब पीडा त हुने नै छ।
उनले भने–यदि कयौ घण्टा कुनै मोटो पर्स पछाडिको गोजीमा राखेर बस्ने हो भने यसबाट मेदरुदण्डको हड्डीको आकार परिवर्तन त हुने छैन तर साइटिका अवश्यक हुन सक्दछ ।
–घुँडालाई मोड्नुस र जमिनमा सुत्नुस्, घुँडालाई तल लैजाने बेला दायाँतर्फ लैजानुस्, जबकि काँध र हिप जमिनमा कायमै राखेर बायाँतर्फ लैजानुस् ।यसबाट तपाईको कम्मरको तल्लो हिस्सामा निकै आराम महशुस हुनेछ ।
–जमिनमा सुत्नुस् र घुँडालाई छातीमा लगाउनुस् र खुट्टाको बाहिरी हिस्सा समात्नुस् । कम्मरको माथिल्लो भागलाई आधार बनाएर रोल गर्नुस् र तपाई देख्नु हुनेछ कि ढाडको पीडा धेरै हदसम्म ठिक भइरहेको छ।
पर्स कसरी राख्नु पर्ला ?
–पैसा राख्ने क्लिप वा पातलो स्टाइलको वालेट राख्न सक्नु हुन्छ, जुन सजिलैसँग अगाडिको गोजीमा अटाउन सकोस् ।
–यस्तो पर्स किन्न सक्नु हुनेछ, जसमा चाबी जोडेर राख्न सकियोस । यसो गर्दा जब तपाई पर्स पछाडिको गोजीमा राखेर बस्न चाहनु हुनेछ तब चाबीले घोच्नेछ र तपाई त्यसलाई अगाडि राख्न बाध्य हुनुहुनेछ ।
–यदि तपाई खाकीको पाइन्छ वा ड्रेस पाइन्ट लगाउनु हुन्छ भने त्यसको टाँक बन्द गरिदिनुस् ताकि पछाडिको वालेट राख्ने बानी नबसोस्।
–यदि सम्भव छ भने पर्स राख्दै छाडिदिनुस् । धेरै यस्ता मानिस पनि छन् जो पातलो कार्डहोल्डर र पैसा अगाडिको गोजीमा राख्दछन् ।
–आफ्नो पर्स वा मोबाइल फोन पछाडिको खल्तीबाट निकालेर राख्नुस् र यसलाई एउटा चुनौतिका रुपमा लिनुस् । भरत शर्मा÷बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: रुसमा हुने ग्लोबल फुटबलमा दुई नेपाली
Next post: लौं आयो यौन इच्छा जागृह हुने बित्तिकै खुल्ने कपडा !